BUHARỊ KWARA LAA; NEF,ỌHANEZE,AFENIFERE – hoo!haa!!
Otu Nigerian Leaders and Elders Forum bụ otu ndi ndu nakwa ndi okenye mpaghara nile na Naịjiriya nke gụnyere otu Northern Elders Forum, NEF, Ohaneze Ndigbo, Afenifere, Pan Niger Delta Forum, PANDEF nakwa Middle Belt Forum(MBF) ekwuwo na Onyeisiala ewerekwala ọnụ gwa ụmụamala Naịjiriya ọzọ na ume ya ezughi ichekwanụ ma ọ bụkwanụ ichi obodo a.
N’ihi ya, ha kwuputakwara mkpebi ha na Buharị kwesịrị inye efe n’afọ ọzọ ka obodo a were nweta onye ndu ọhụrụ, onye ọchịchị doro anya.
Ha gosiri mwute ha na Buharị nọkwara n’okwu ọ gwara ọgbakọ izugbe otu mbaụwa bụ United Nstụons General Assembly were tagherikwaa ọnụ ọzọ site na ịkana ekwukwa na ihe butere agha Boko Haram bụ ndi agha ọlụọ ọlaa si mba Ịrak, Libya na Siria.
Ndi tinyere aka n’ozi ahụ gụnyere Onye ndu PANDEF, Ichie Edwin Clark; Onye ndu Ọhaneze Ndigbo, Ichie Nnịa Nwodo, Onye ndu Northern Elders Forum (NEF) , Ọkammụta Ango Abdullahi; Onye ndu Afenifere, Ichie Ayo Adebanjo; nakwa Onye ndu, Middle Belt Forum, Dọkịnta Bitrus Pogu.
Ozi ahụ kwuru sị,“ Ihere ji otu Nigerian Leaders and Elders Forum maka etu Onyeisiala Muhammadu Buhari siri nọrọ n’ihu mbaụwa were kwuputakwa ọzọ na agha na-ada na mpaghara Sahel nakwa mpaghara Ezu Chad ( Lake Chad) sitere n’aka ndi agha ọlụọ ọlaa gbapụtara na Ịrak na Siria tinyekwara mgba ọgụ e nwetara na Libya tisaworo etisa.
“Onyeisiala jizi aka ya ama onwe ya ikpe site na ịgwa ụmụala Naịjiriya na ọrụ kacha mkpa dịịrị ya bụ ọrụ nchekwa anyịwo ya.
“N’afọ atọ n’ọkara gara aga, puku pụrụ puku ụmụamala anyị anwụọla n’aka ndi omekome na ndi ogbu eyija (terrorists), Gọọmentị anyị enwebeghị otu onye o nwudere na abụghị ịkọ sọọsọ akụkọ.
“Ọ tụru anya ka ndi Naịjiriya kpọọ ọgbakọ nkwado iji laa ya aka na ọ gwara ha ebe ndi na-egbu ha si abịa na enweghị ihe ọbụla o menwuru banyere ya.
“Ihe kacha njọ bụ na nchekwa bụ isi sekpụ ntị n’atụmatụ ọrụ o wepụtara oge ọ na-arigo n’ọkwa
“Ọ bụrụ na ndi ekperime si mba ofesi chọọ iweghara ọchịchị ala anyị, ọ bụzị udiri mkpesa a anyị ga-atọ na ya?
“Nke a kwadoziri mkpebi anyị na ọ dị mkpa Naịjiriya inwe onyeisiala ọhụrụ site n’afọ ọzọ, onye ghọtara ọrụ dịịrị onyeisiala ọnọdụ ndi obodo ya na-emetụ n’obi.
“Anyị agaghi atọ na ịnwụ otu a kwa ụbọchị dịka atụrụ na enweghị onye nche wee ruo na afọ anọ ọzọkwa.
Previous Post: ỌSỤN;YOROBA MEENU KA ANAMBARA
Next Post: Zimbabwe:Enyi azọgbuola onye nkirianya